သားကို အရှက်ကြောင့် ပစ်ခဲ့တာလား….အသက်ကြောင့် ပစ်ခဲ့တာလား…. -
သားကို အရှက်ကြောင့် ပစ်ခဲ့တာလား…. အသက်ကြောင့် ပစ်ခဲ့တာလား….
အမိမဲ့သား ရေနဲငါး သွေးမပျက်ပါ အမေ ပေးရက်တာ အမေ့ဆန္ဒ သံသယ ဆိုတာ မထားပါရစေနဲ့တော့ သားဟာ အမေ့သားပါ အဖေထားခဲ့တာ အမေပါ အမေထားရက်တာ သားပါ
အ မေ သား ကို… အ ရှက် ကြောင့် ပစ် ခဲ့ တာ လား?
အသက်ကြောင့် ပစ်ခဲ့တာလား? လွမ်းရေးကြောင့် ပစ်ခဲ့တာလား?
ဝမ်း ရေး ကြောင့် ပစ် ခဲ့ တာ လား?
နားလည်ပါရစေ အမေ နို့ဘူးထဲက နို့ချိုရည် အမေ့နို့ မဟုတ်မှန်း သားသိတယ်… နူးညံ့စွာထွေးထားတဲ့ လက် အမေ့လက် မဟုတ်မှန်း သားသိတယ် အသက်တစ်ချောင်းနဲ့ လူသား တန်ဘိုး ထားပုံခြင်းများ မှားနေသလား အမေရယ် ….
ရင် နဲ့ လွယ် ထား ရ တဲ့ ကာ လ မွေး ဖွား ရ တဲ့ ဒု က္ခ အ မေ့ ကို သ နား တယ်
ပစ်ပါအမေ.. စွန့်ပါအမေ.. အမေ့ကို သား ဗွေမယူပါဘူး အမေထက် သာတဲ့ ဂရုဏာရှင်တို့လက် အမေ အပ်ခဲ့တာဘဲလေ… အမေ တာဝန်ကျေပါတယ်… အမေ
သားခံယူချင်တာ… အမေ့ဆီက မေတ္တာပါ သားခံယူချင်တာ… အမေ့ဆီက ဂရုဏာပါ.. အမေ ဪ… သားဘဝမှာ မွေးကျေးဇူးကို မမေ့သလို ကျွေးကျေးဇူးတွေ ဆပ်ရပါဦးမယ် ပုခက်တွင်းက နှလုံးသား ရေနဲငါး ဖြစ်ပါစေ…
လူးလွန့်ရင်း အသက်ရှင် ရင်ခွင်မဲ့တွေကြားမှာ အားဖြစ် သမိုင်းတခေတ်မှာ… အမေ့သား.. ဟာ ဘာဖြစ်နေတယ် ဆိုတာလေးတော့ အမေ သိစေချင်ပါသေးတယ်ဗျာ… မွေးကျေးဇူး ဆပ်ခွင့်ပေးပါ.. အမေ…
ဥတ္တရမိုး (ရေနဲ ငါး)
လေးစားစွာဖြင့် ခရစ်ဒက် — thu ta news
သားကို အရှကျကွောငျ့ ပဈခဲ့တာလား…. အသကျကွောငျ့ ပဈခဲ့တာလား….
အမိမဲ့သား ရနေဲငါး သှေးမပကျြပါ အမေ ပေးရကျတာ အမဆေ့န်ဒ သံသယ ဆိုတာ မထားပါရစနေဲ့တော့ သားဟာ အမသေ့ားပါ အဖထေားခဲ့တာ အမပေါ အမထေားရကျတာ သားပါ
အ မေ သား ကို… အ ရှကျ ကွောငျ့ ပဈ ခဲ့ တာ လား?
အသကျကွောငျ့ ပဈခဲ့တာလား? လှမျးရေးကွောငျ့ ပဈခဲ့တာလား?
ဝမျး ရေး ကွောငျ့ ပဈ ခဲ့ တာ လား?
နားလညျပါရစေ အမေ နို့ဘူးထဲက နို့ခြိုရညျ အမနေို့ မဟုတျမှနျး သားသိတယျ… နူးညံ့စှာထှေးထားတဲ့ လကျ အမလေ့ကျ မဟုတျမှနျး သားသိတယျ အသကျတဈခြောငျးနဲ့ လူသား တနျဘိုး ထားပုံခွငျးမြား မှားနသေလား အမရေယျ ….
ရငျ နဲ့ လှယျ ထား ရ တဲ့ ကာ လ မှေး ဖှား ရ တဲ့ ဒု က်ခ အ မေ့ ကို သ နား တယျ
ပဈပါအမေ.. စှနျ့ပါအမေ.. အမကေို့ သား ဗှမေယူပါဘူး အမထေကျ သာတဲ့ ဂရုဏာရှငျတို့လကျ အမေ အပျခဲ့တာဘဲလေ… အမေ တာဝနျကပြေါတယျ… အမေ
သားခံယူခငျြတာ… အမဆေီ့က မတ်ေတာပါ သားခံယူခငျြတာ… အမဆေီ့က ဂရုဏာပါ.. အမေ ဪ… သားဘဝမှာ မှေးကြေးဇူးကို မမသေ့လို ကြှေးကြေးဇူးတှေ ဆပျရပါဦးမယျ ပုခကျတှငျးက နှလုံးသား ရနေဲငါး ဖွဈပါစေ…
လူးလှနျ့ရငျး အသကျရှငျ ရငျခှငျမဲ့တှကွေားမှာ အားဖွဈ သမိုငျးတခတျေမှာ… အမသေ့ား.. ဟာ ဘာဖွဈနတေယျ ဆိုတာလေးတော့ အမေ သိစခေငျြပါသေးတယျဗြာ… မှေးကြေးဇူး ဆပျခှငျ့ပေးပါ.. အမေ…
ဥတ်တရမိုး (ရနေဲ ငါး)
လေးစားစှာဖွငျ့ ခရဈဒကျ — thu ta news
This Month : 33797
This Year : 205023
Total Users : 500156
Total views : 2069603